Olee otú undelete iPhone Data (gụnyere iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS)
> Resource> iPhone> Olee otú iji undelete iPhone Data (gụnyere iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS)
Ụzọ ọ bụla undelete iPhone data?
M na mberede ehichapụ photos nke ezinụlọ m njem na m iPhone 4, ọ dịghị ndabere n'ezie. M maara na e nwere omume na ike wepụ iTunes ndabere, ma ihe m chọrọ bụ ka iṅomi m iPhone ka undelete data si m iPhone 4. dị ụzọ ọ bụla ime nke a?
Adala mbà. E nwere mgbe ndị dị otú ahụ n'ụzọ na-ike ka ị na ozugbo iṅomi gị iPhone ka undelete faịlụ na ya. Maka ojiji nkeonwe, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery), na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows iPhone Data Recovery) na-ndị mbụ na-apụta na 2012, iche iche maka Mac na Windows ọrụ. Ha abụọ bụ ndị a pụrụ ịdabere na na ezi ọkachamara. Ị nwere ike iji ha ka ha kpọmkwem iṅomi gị iPhone ka undelete data na ya, ma ọ bụ jiri ha ka ha wepụ gị iTunes ndabere faịlụ.
Ọ bụrụ na ị nri ugbu a, na ọnọdụ nke adịkwa data si iPhone, ọ ga-abụ a ezi nhọrọ nwere a na-agbalị na Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ya-enye gị ka ịhụchalụ scanned data n'ihu gị naghachi ha.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a-agbalị. Cheta na-ahọrọ nri version.
Olee otú undelete faịlụ site na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Iji undelete data si iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, ma ọ bụ iPhone 3GS, na Windows version na Mac version ọrụ a yiri nke ahụ. Ọzọ, ka na-na Windows version dị ka ihe atụ.
Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-agba ọsọ usoro ihe omume, na mgbe ahụ ị ga-esi a window n'okpuru.
IHE: E a ihe ị chọrọ iburu n'uche tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ. Nịm gị iPhone na ụgbọ elu mode ozugbo o kwere omume mgbe ị n'amaghị ama ehichapụ data na ya. Ọ bụla ọrụ na iPhone nwere ike mee ka emebi gị ehichapụ data, dị ka overwriting.
N'ihi na iPhone 5 na iPhone 4S:
N'ihi na iPhone 4 na iPhone 3GS: Download a nkwụnye na mgbe ị na-ebe a.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone ịchọta furu efu data
N'ihi na iPhone 5 / 4S ọrụ, gị na mkpa iji pịa Malite iṅomi na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka data na ya. Ka iPhone 4 na iPhone 3GS ọrụ, gị mkpa iji tinye gị iPhone si scanning mode tupu ike iṅomi ya. Soro ntuziaka n'okpuru rụchaa ya:
Jide gị iPhone na pịa Malite bọtịnụ.
Na ịpị Ike na Home buttons n'out oge maka 10 sekọnd.
Mgbe 10 sekọnd, hapụ Ike button, ma ịnọgide na-ejide Home ọzọ 15 sekọnd.
Ọ bụrụ na ị na-emezughị nke ahụ n'oge mbụ, na-agbalị nnọọ ya ọzọ, ruo mgbe ị gwara na ị na banyere scanning mode na usoro ihe omume amalite ịgụ isiokwu gị iPhone dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 3. undelete data gị iPhone
Doppler ga-ewe gị a mgbe. Ọ bụrụ na ị nwere nza nke data, o nwere ike ị ogologo oge. Mgbe ọ na-agwụ, ị ga-enweta a Doppler N'ihi dị ka ndị a. Niile hụrụ data na-egosipụta na ige, dị ka photos, kọntaktị, ozi, oku log, wdg Ịnwere ike ihuchalu ha niile otu otu. Akara ndị ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Data ịchọta ebe a na-abụghị nanị ndị ehichapụ na nso nso, ma na-agụnye ndị ugbu a na gị iPhone. Ị nwere ike iji slide button n'elu ikewara ha: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
iPad ndabere extractor: Olee otú Wepụ iPad ndabere
Olee otú Wepụ iPhone Ndi ana-akpo ka vCard / VCF
The Best Ngwọta n'ihi jailbroken iPhone / iPad Iji nweta nkwalite ka iOS 9
iOS9 iPhone vs. Samsung Galaxy S6 Edge
Top 10 Halloween Ringtones mmenyenjo Enyi Gị
Olee otú Chọpụta ekwentị gị Number On Your iPhone
11 N'ezie,-jụrụ ajụjụ banyere iPhone ndabere na iTunes / iCloud
Olee otú Naghachi Photos Naanị site na iPhone ndabere